उमेर नपुग्दै मानिस बुढो हुने कारण, एस्तोपो रहेछ। ….. – News Nepali Dainik
उमेर नपुग्दै मानिस बुढो हुने कारण, एस्तोपो रहेछ। …..
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ समय: १९:०८:४२
१. (गलत खानपान त्याग्ने)
आधुनिक युगको प्रवेशसंगै मानिसले गलत खानपान खाने गरेका छन् । पहिले अर्गानिक र सादा खानाको प्रयोग हुन्थ्यो । तर आजकल तारेको, भुटेको र बाहिरको खानाले हाम्रो स्वास्थ्यका साथै मुटुमा असर गर्दछ । र मानिस समय अगावै बुढो हुन पुग्दछ ।२. (बिना परीश्रम बस्नु)
Last Updated on: January 26th, 2021 at 7:08 pm
२४२५ पटक हेरिएको